IVivo Z3X: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
Ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, IVivo sele isishiyile neefowuni ezininzi. Uninzi lwezi modeli lufikelele kwinqanaba eliphakathi lophawu lwesiTshayina, NjengeVivo S1 okanye X27 kunye neX27 Pro. Inkampani ngoku iveza ifowuni yayo entsha yeli candelo lentengiso. YiVivo Z3X, umboniso wayo osele uqhubeke ngokusemthethweni e-China.
Kule Vivo Z3X sifumana ezinye Iimpawu esele zixhaphakile kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Iscreen esikhulu, iprosesa elungileyo, kunye nekhamera ngasemva kabini. Ke ihlangabezana neemfuno ezininzi eziqhelekileyo kule meko.
Siyabona kwakhona ukuba le modeli inezinto ezithile ezifanayo kunye neVivo Z3, ethi kraca yaziswa ngokusesikweni ngo-Okthobha ophelileyo. Kule meko, uphawu lwesiTshayina luyothusa kuyilo, ukusukela basishiya nenotshi yemveli, endaweni yohlobo lwethontsi lamanzi, njengoko sibona kakhulu kwezi nyanga.
1 Iinkcukacha zeVivo Z3X
Iinkcukacha zeVivo Z3X
Uphawu lwaseTshayina luhlala lusishiya neemodeli ezilungileyo kolu luhlu luphakathi. Into ecacileyo kwakhona ngale Vivo Z3X. Ineempawu ezintle kuluhlu lwazo. Ukongeza ekuhlangabezeni ezinye zeemfuno abasebenzisi abazifunayo kwiifowuni ezikweli candelo lentengiso. Ke ithembisa ukungadanisi. Oku kukucaciswa kwayo:
Isikrini: 6,26-intshi IPS LCD isisombululo FullHD + kunye 19: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 660
Ukugcinwa kwangaphakathi: i-64 GB (iyandiswa ngekhadi le-SD elincinci)
Ikhamera esemva: 13MP + 2MP kunye ne-LED
Ibhetri: 3.260 mAh
Inkqubo yokusebenza: I-Android 9 Pie eneFuntouch OS 9.0 njengobubanzi
Ukunxibelelana: I-Bluetooth 5.0, i-WiFi 802.11 a / c, i-LTE, iSIM ezimbini, iGPS, i-GLONASS
Imilinganiselo: 154,81 x 75,03 x 7,89 mm
Njengesiqhelo kweli candelo namhlanje, ifowuni isishiya nekhamera ngasemva kabini. Kule meko, indibaniselwano ye-13 + 2 MP sensors iyasetyenziswa. Ixhaswe yi-AI, ke sinemowudi eyongezelelweyo yeefoto kunye nokusebenza okuhle kulindeleke kubo. Iilensi enye isetyenziselwa umphambili, kule meko i-16 MP. Ikhamera elungileyo xa kufikwa ekuthatheni iiselfie kunye nefowuni. Inzwa yeminwe ibonakele kule meko ngasemva kwale Vivo Z3X.
Ibhetri yesixhobo ine-3.260 mAh. Ngokudityaniswa neprosesa enayo, ukongeza ekubeni sele unayo i-Android Pie ngokwendalo, enemisebenzi eyahlukeneyo yolawulo lwebhetri, kufanele ukuba isinike ukuzimela okuhle ngalo lonke ixesha. Inikwe njengoluhlu olulinganayo oluphakathi, kuyilo olusebenzayo kunye nexabiso elikhulu lemali, ngokungathandabuzekiyo yenye yamandla ayo. Ke ukuba iphehlelelwe eYurophu, yimodeli yokuqwalaselwa kweli candelo lentengiso.
Okwangoku, ukwenziwa kwale Vivo Z3X kwenzeke e-China, Yeyiphi imarike ekuphela kwayo eqinisekisiweyo yale fowuni. Inkampani khange ichaze nantoni na malunga nokumiliselwa kwayo kwezinye iimarike. Nangona ithathela ingqalelo ubukho bamazwe aphela benkampani, akukho lula ukuba iphehlelelwe eYurophu. Kodwa siya kulinda ezinye iziqinisekiso ezisemthethweni ezivela kuwe.
Ngomhla we-1 kaMayinga kuya kubakho ukuyigcina ifowuni, ngelixa ukumiselwa ngokusesikweni kwayo kuya kuba nge-8 kaMeyi. Abo banomdla baya kuba nakho ukukhetha phakathi kwemibala eliqela, enje ngombala omnyama, omfusa okanye obomvu. Sifumana ingxelo enye yefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, i-4/64 GB.
Ixabiso layo lokwazisa liyi-1.198 yuan, emalunga nee-160 zeerandi zokutshintsha. Ke le Vivo Z3X iboniswa njengemodeli efikelelekayo kolu luhlu luphakathi. Kodwa, ngelishwa, akunakulindeleka ukuba iphele isungulwa eYurophu. Nangona sinethemba lokwazi ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IsiTshayina Android » IVivo Z3X: Uluhlu oluphakathi kwinqanaba elitsha kraca
I-Kirin 985 Iinkcukacha zokuqala zityhilwe